पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बोलाए पत्रकार सम्मेलन, राजीनामा दिने सम्भावना ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बोलाए पत्रकार सम्मेलन, राजीनामा दिने सम्भावना !
काठमाडौँ, २३ पुस, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अहिले बिहान १० बजेकालागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । सो सम्मेलनबाट मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिनसक्ने धेरैले विश्लेषण गरेका छन् । तर मन्त्रालय स्रोतले भने राजीनामा दिन नभई वाइडबडी खरिद प्रकरणमा आफू मुछिएको विषयमा स्पष्ट पार्न मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको बताएको छ ।
मन्त्री अधिकारीसहित बहालवाल दुई सचिवहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारबाही गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले उनीहरुले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान गरिदमा घोटाला गरेको, मतियार बनेको र गल्ती गरेको भन्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्री अधिकारीले आफू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदै भ्रष्टाचार छानविनमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । यता सरकारले भने उपसमितिको प्रतिवेदन गलत रहेको दाबी गर्दै र त्यो समितिलाई अविश्वास गर्दै अर्को छानविन समिति गठन गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-01-07 2019-01-07 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी राजीनामा
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका दोषीलाई कारवाही गर्न लेखा समितिको निर्देशन
नेकपा नेता अधिकारी पुनः ह्याम्स अस्पताल भर्ना
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका दुई कार्यकर्ताले पार्टी छोडे
Tags: पर्यटन मन्त्री, रवीन्द्र अधिकारी, राजीनामा